Social Media na Mmetụta Management | Martech Zone
Tuzdee, Machị 2, 2010 Satọdee, Nọvemba 28, 2015 Douglas Karr
N'ụtụtụ a ka m na-agụ nnukwu akwụkwọ akụkọ achọtara site na saịtị Aprimo, na ijikọta mgbasa ozi mmekọrịta.
Ndị na-ere ahịa ekwesighi ịmalite site na ọkọlọtọ iji wuo ike mmekọrịta egwuregwu na-elekọta mmadụ na ngwakọta nkwukọrịta dị. Site na ịgwọ mgbasa ozi mmekọrịta dị ka mgbatị nke mgbasa ozi ọhụrụ na Web 1.0, ndị na-ere ahịa na-eji ike ọhụrụ ya eme ihe n'ime bandwidth na akụ ha dị.
Akwụkwọ akụkọ ahụ na-agwa ndị ọrụ nke ahịa na ahia a na-agbanyetụ. Ndị na - ere ahịa - ndị anaghị enwe mmekọrịta n'etiti ọha na eze - chọrọ ka ha kpọọ ma jikwaa ụdị ahụ n'ihu ọha. Ha kwesiri ime nke a n'enweghi ọzụzụ obula njikwa nnabata. M tụlere nke a yana nke m ngosi na Webtrends Engage.
N'otu oge ahụ, anyị a na-atụ anya ka ndị na-ere ahịa weghara ọnọdụ na Social Media, mmejuputa usoro ahia na nkwukọrịta nke ha na-emezughị.
Akwụkwọ akụkọ ahụ na-enye ndụmọdụ anọ:
Mepụta a Baịbụl hiwere isi n'ebe site n'itinye onye sitere na ndị ọrụ ahịa na-elekọta ọrụ mgbasa ozi. Onye obula kwesiri ibu oru nke imeputa usoro mgbasa ozi nke oru ndi mmadu, tinyere imeputa usoro nke gha agha uzo nke ugboala, otu aga esi edozi ya, na ndi mmadu kwesiri inye ha dika iwu ulo oru.
Soro ọrụ ndị ọzọ rụkọta ọrụ ndị na-esonye na usoro ịzụ ahịa buru ibu, gụnyere ọrụ ndị ahịa na njikwa ngwaahịa. Site na 2010, ihe karịrị 60% nke ụlọ ọrụ Fortune 1000 nwere weebụsaịtị nwere ụdị ụfọdụ nke ịntanetị nwere ike iji maka ebumnuche ndị ahịa. Agbanyeghị, ọ dị mkpa na ịre ahịa mara ọrụ mgbasa ozi na mmekọrịta mmadụ na ibe ya site na ndị na-ahụ maka ọrụ ndị ahịa postsales iji hụ na ekenyela onye nwe ya gafee ọrụ dịgasị iche iche na-esonye na mmezu nke atụmatụ CRM buru ibu.
Mee ka ndi mmadu si na ndi oru ahia bia na ahia ahia, karịsịa ndị na-etinye aka na nnọkọ mmekọrịta mmadụ na ibe ya nke na-eme ka nkwukọrịta otu-na-otu nwee. Ndị na-ere ahịa na-enweghị ọzụzụ ma ọ bụ ahụmịhe na "njikwa mmegide" dịkarịsịrị ike na ụwa nke mgbasa ozi mmekọrịta, n'ihi na ndị ahịa na-akatọ onye na-eweta ọrụ na ngwaahịa ya na ọgbakọ ọha.
Mee dị ka onye gafere na ndị isi ahịa na ndị na-ere ahịa na-achọ isonye na soshal midia, ọkachasị ebe ha na-ekwurịtara ọtụtụ, ma zụọ ha otu ntụzịaka ederede ahụ nyere ndị ahịa na nkwukọrịta iji hụ na nchekwa akara na ozi na-agbanwe agbanwe.
Enweela m ụfọdụ ntụziaka ndị na-ere ahịa ịmalite ịmalite Social Media - mana nkọwapụta akwụkwọ ọcha akọwapụtara ọtụtụ ihe site na atụmatụ ụlọ ọrụ zuru ezu. M na-na na ịga ọzụzụ ahịa n'ime afọ gara aga ma kwadoro ya ndị ahịa niile! Ana m agba ajụjụ ọnụ Bill Godfrey, CEO nke Aprimo taa, ma na-ekwukwa ihe ịtụnanya a - chọọ vidiyo na-abịa!
Ike Aprimo agbakwunyere, na sọftụwia ire ahịa na-enyere ndị ahịa B2C na B2B aka ịga nke ọma na-agbanwe ọrụ nke azụmaahịa site na ịchịkwa mmefu ego na itinye ego, na-ewepu silos na-arụ ọrụ nke ọma yana na-eme mkpọsa ọtụtụ ọwa iji mee ka ROI dị mma. site na Aprimo website.
Tags: njikwa nnabataAjụjụ ire ahịaelekọta mmadụ medianjikwa mmekorita nke mmadu
Ọnọdụ nke Deep Ripples Inc.
Mgbasa mgbasa ozi na-agbadata ntụgharị uche nke "ngalaba" ka usoro niile na-acha. Ọ dị mma maka azụmahịa.